I-United Airlines yazisa ngeNdiza eNtsha engamisiyo ukusuka e-US ukuya eJordani
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IJordani Breaking News » I-United Airlines yazisa ngeNdiza eNtsha engamisiyo ukusuka e-US ukuya eJordani
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • IJordani Breaking News • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Amman Jordan ukuya eWashington DC
IBhodi yezoKhenketho iJordani (i-JTB) iyavuya ukwazisa ngenqwelomoya entsha, yenze kwalula nangakumbi kubahambi baseMelika ukubhabhela eJordani. I-United Airlines iya kubonelela ngeenqwelomoya ngokuthe ngqo ukusuka eWashington DC ukuya eAmman ukuqala ngoMeyi 5, 2022, kwaye iyakubhabha kathathu ngeveki. Le yindiza yokuqala ethe ngqo ukudibanisa izixeko ezikhulu.
Uphando lwakutsha nje iBhodi yezoKhenketho eJordani igqityiwe yabonisa ukuba u-2022 ukulungele ukwaphula iirekhodi zokuhamba aye kwi-DC.
Iipesenti ezingama-65 zabarhwebi eUnited States babhukisha iindawo zokuhamba ekwindla lowama-2021 ukuya eJordani, xa kuthelekiswa neepesenti ezili-15 kuphela zonyaka ongaphambi kwalowo.
Ngeenkqubo ezicacileyo ze-COVID ezikhoyo kwilizwe lonke, abahambi kufuneka bazive bekhululekile ukutyelela iJordani.
"Siyavuya ukwazisa ikomkhulu elitsha kwikomkhulu, iWashington DC ukuya eAmman, inkonzo, yenza kube lula ukudibanisa abantu abaninzi neJordani kunye nelifa elityebileyo kunye nenkcubeko ilizwe elinikezela ngayo," kwabelwana ngalo uPatrick Quayle, usekela Mongameli oMkhulu Inethiwekhi kunye neManyano.
Isibhengezo esivela e-United sibonisa ukuzithemba kwenqwelomoya kwindawo ekuya kuyo njengoko uhambo lwamanye amazwe luqala ukuthatha emva kokutshatyalaliswa kwalo bhubhane. Eli nyathelo likwaxhasa uphando lwakutsha nje iBhodi yezoKhenketho eJordani egqityiweyo ebonisa ukuba u-2022 ukulungele ukwaphula iirekhodi zohambo aye kwindawo aya kuyo. Olu phando luye lwabonisa ukuba iipesenti ezingama-65 zabarhwebi eUnited States babenendawo yokubhukisha ekwindla lowama-2021, xa kuthelekiswa neepesenti ezili-15 kuphela zonyaka ongaphambi kwalowo.
“Siyavuya ukwamkela umntu ophethe ilifa eJordani ukunceda ukuvula ishishini phakathi kwamakomkhulu amabini eWashington DC naseAmman. Sisoloko sisamkela abahambi baseMelika abaya eBukumkanini ukuba bafumane inkcubeko engummangaliso kunye neyantlukwano efumaneka kuyo iJordani. ” Ukwabelwana ngo-Abed Al Razzaq Arabiyat, uMlawuli oLawulayo weBhodi yezoKhenketho eJordani.
"Sijonge phambili ekwamkeleni i-United Airlines e-Amman, kwaye sisebenza kunye ukuzisa abahambi ngakumbi ukuba bafumane ilizwe lethu elimangalisayo," utshilo uMalia Asfour, uMlawuli weBhodi yezoKhenketho eJordani eMntla Melika. “Ngeenkqubo ezicacileyo ze-COVID ezikhoyo kwilizwe liphela, abahambi kufuneka bazive bekhululekile ukutyelela iJordani. Eli linyathelo elikhulu lokudibanisa ikomkhulu laseJordani neWashington DC, kunye nokukhuthaza abahambi baseMelika ukuba babhukishe amava ohambo olunentsingiselo kwiindawo ezinomtsalane zehlabathi ezifana nePetra, iWadi Rum kunye noLwandle Olufileyo. ”
Ukuze ufunde okungakumbi ngale ndlela intsha, ndwendwela united.com/en-us/iindaba ezintsha.
Ukufunda ngakumbi ngentsingiselo hamba uye eJordani ndwendwela iwebhusayithi utyelelo.com.